समचार Archives - Page 123 of 124 - Saptakoshionline
इटहरीमा जनमत नपाउँने पार्टीहरु कुन कुन छन हेर्नुहाेस……………………….
इटहरीः स्थानीय तह अन्तरगत इटहरीमा चुनाव उठ्नेहरु अधिकांसले जनमत पाएनन् । ताम झामका साथ उम्मेदवार उठेकाहरुलाई जनताले पत्याएनन् । केवल उम्मेदवार भए र विभिन्न नारा लाए । चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीको उपमेयरकी उम्मेदवार रुजा घिमिरेलाई कुनै मत परेन । घिमिरेको चुनाव चिन्ह कप प्लेटमा कुनै मत खसेन । मेयरमा पनि चुरेभावरले मेयरका उम्मेदवार रामप्रसाद रेग्मीले चुनाव चिन्ह केटाकेटीमा ...
के बच्चालाई अनुशासित बनाउन पिट्नुहुन्छ ? त्यस्तो गल्ति नगरौँ ।
बच्चालाई अनुशासित बनाउने बाहानामा पिट्नुहुन्छ भने यो गलत तरिका हो । बच्चालाई सहि बाटोमा डोहोर्‍याउनका लागि शारीरिक सजाय दिने वा पिट्ने कामले राम्रो नतिजा दिदैन । बरु, यस्तो व्यवहारले बच्चामा डर, अत्माग्लानी, तनाव पैदा गर्छ । जब बच्चालाई कुटिन्छ, डर देखाइन्छ, यातना दिइन्छ भने त्यसले उसलाई सकारात्मक बाटोमा लाने होइन, बरु नकारात्मकतर्फ मोड्छ । बच्चाहरु झन आक्रमक, आपराधिक हुने भय हुन्छ । विश्वका कु...
भरतपुर प्रकरणः आज सर्वोच्चमा बहस हुन सकेन, तोकियो अर्को मिति
२३ असार, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान वा मतगणना भन्ने विवादमा आज सर्वोच्चमा बहस हुन सकेन । पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि असार २६ गतेलाई अर्को सुनुवाई मिति तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको लागि तोकिएको थियो। यो मुद्दाको पेशी सातौँ नम्बरमा राखिएको थियो। असार ६ गते च्यातिएका मतपत्रको पोका...
इटहरी उपमहानगर–नेकपा एमाले बिजयी
इटहरी, २३ असार । इटहरी उपमहानगरपालिकाको मत गणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार नेकपा एमालेका मेयर पदका उम्मेदवार द्धारिकलाल चौधरीले २२६८९ मत प्राप्त गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको पहिलो मेयर बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उपमेयरमा पनि एमालेकै उम्मेदवार लक्ष्मी गौतमले २१८४२ मत ल्याएर बिजयी बन्नुभयो । मेयरमा बिजयी बन्नु भएको नेकपा एमालेका उम्मेदवार द्धारिकलाल चौधरीले निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काङ...
सिरहामा झाडामा झडा पखालावाट २ को मृत्यू ३३ विरामी
सन्तोष यादब सिरहा । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतार गाउँपालिका वडा नंं ६ सितापुर गाउँमा १३ दिन अघि फैलिएको झाडा पखाला अझै नियंत्रणमा आएको छैन । गत असार १० गते झाडा पखालाकै कारण ५५ वर्षिय मागैन यादवको मृत्यू भएको थियो भने १९ असारमा सोही गाउँका ५० वर्षिया गुजरीदेवी यादवको ज्यान गएको थियो । २ जनाको ज्यान गईसकेको छ । झाडा पखालावाट गाउँका ३३ जना अझै विरामी छन् । विरामीहरु मध्ये २ जनाको स्थानीय सितापुर स्वास्...
इलाममा ८ स्थानीय तहको नतिजा आइ सक्यो २ बाँकी प्रमुखमा एमाले ५ कांग्रेस ३
याम माबोहाङ लिम्बू इलाम । इलामको १० स्थानीय तह मध्ये आज विहानसम्ममा ७ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । अन्तिम नतिजा अनुसार दुई नगरपालिकासहित ५स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमा पद नेकपा एमालेले हात पारेको छ । दुई गाउँ पालिका मध्ये एकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा परेको छ भने अर्कोमा अध्यक्ष कांग्रेस र उपाध्यक्ष एमालेको मिश्रित विजयी नतिजा आएको छ । जिल्लाको ४ नगरपालिक...
सुर्ती जन्य पदार्थ सम्वन्धि अभिमुखीकरण
इटहरी । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको आयोजना तथा इटहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको संयोजनमा विहिबार इटहरीमा सुर्ती जन्य पदार्थ बाट मानिसहरुमा पुग्ने हानिकारक सम्वन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इटहरी उपमहानगर क्षेत्रका उद्योगी ब्यापारी, बुद्धिजीवि सञ्चारकर्मी प्रहरी ,बाल सञ्जाल र चिकित्सकहरुको सहभागिता रहेको उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विशेषगरी धुमपानबाट मानिसको स्वास्थ्यमा प...
दुर्घट्नामा एक युवाको मृत्यु
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाको मुख्य चोकदेखि १ किलोमिटर दक्षिण वडा नम्वर ९ को धरान विराटनगर सडक खण्डको साथी फ्यूल पेट्रोल पम्प नजिक ट्याक्टरको ठक्करबाट इटहरी २० का मोटरसाइकलमा चालक रोशन तामाङ्गको घट्नास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । इटहरीबाट विराटनगरतर्फ गईरहेका तामाङले ओभरटेक गर्ने क्रममा ट्याक्टरमा ठोक्किएपछि पछाडीवाट आउँदै गरेको ट्रकले पुन ठक्कर दिदा तामाङ्गको मृत्यु भएको हो । को ६ प ९९२ नम्वरको मो...
नेपाली काँग्रेसका उमेद्वार दिपक गौतम विजय
इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका ६ नम्वर वर्डाको अन्तिम मत परिणाम रोचक मोडमा सम्पन्न भएको छ । करिव दुई दसक अघि हालको इटहरी ६ तत्कालीन वडा नम्वर १ मा एमाले उमेद्वारले नेपाली काँग्रेसका उमेद्वारलाई १६ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए भने अहिले नेपाली काँग्रेसका उमेद्वार दिपक गौतमले एमालेका उमेद्वारलाई १७ मत अन्तरले पराजित गरेका छन । इटहरी ६को अन्तिम मत परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसका उमेद्वार दिपक...
मेयर भएकाे १२ घन्टा नवित्दै काम शुरू गरे डा. धवलले
। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर डा. धवल शम्शेर राणाले सपथ नलिदै काम गर्न शुरू गरेका छन् । गत अाइतवार देखि परिरहेकाे निरन्तर बर्षाले नगर क्षेत्रमा हुने सम्भावित डुबानका बारेमा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सहितकाे टाेलीसंग छलफल गरेका छन् । बर्षाकाे पानीले नेपालगंज बजार क्षेत्रमा डुबान हुने समस्या रहिअाएकाे छ । यसलाइ कसरी कम गर्न सकिन्छ र तत्काल के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उह...